Izifundo ezi-5 zeNaruto Uzumaki Zokusingatha Izinkinga Zempilo - Okunye
Izifundo ezi-5 zeNaruto Uzumaki Mayelana Nendlela Yokusingatha Izinkinga Zempilo
Njengabalingiswa abaningi be-Shonen anime uNaruto uthathe izinhliziyo zabalandeli abaningi.
Ngemuva kwe-anime boom ekuqaleni kuka-2000 noToonami, njengabantu abaningi, ngaya ku-inthanethi ukuyofuna i-anime ethe xaxa. Okuthile okushaye indawo efana no-Yu Yu Hakusho no-Dragon Ball Z.
Lapho ngikhubeka kuNaruto ngithole okungaphezu nje kwesenzo esisha esigcwele i-anime. Ngithole umngani omusha futhi ifilosofi entsha yempilo.
Esinye sezizathu esenza ukuthi i-anime ithande ukuthandwa kangaka entshonalanga kungenxa yokuthi nge-anime ungafunda okuningi kunamakhathuni asentshonalanga.
UNaruto ungifundise okuningi ngendlela yokubhekana nezinkinga zempilo yami futhi okubaluleke kakhulu, isizungu.
UNaruto wayengumuntu ongazinakekeli futhi yize ayengaziphethe kahle wayengifundisa okuningi kunokuzimela. Kodwa kwakungeyona nje uNaruto uqobo kodwa kunalokho, lonke iqembu labalingiswa.
URock Lee, uNeji, uKakashi, uSasuke, lonke iqembu lezigelekeqe.
uhlu oluphezulu lwe-anime sonke isikhathi
Ngakho-ke kulabo abathi awukwazi ukufunda lutho kusuka ku-anime noma leyo anime ingezingane , bahleke ebusweni babo noma babakhombise lo mbhalo.
Ngangicabanga ukuthi impilo yami yayinzima ngenkathi ngikhula.
Isikhathi esiningi ngangizizwa ngiyintandane njengoNaruto. Ukubuka le anime, kungifikele impela ukuthi ngibheke impilo ngenye indlela.
Mina Kuzwakala kuhlekisa ukuthi ngifunde lokhu kwabanye abalingiswa abanopopayi kepha lokho kuyithonya le mibukiso elinalo engqondweni yomuntu.
Akunjalo nje ukuzijabulisa, kufinyelela emphefumulweni wakho. Iba yingxenye yakho yingakho siyithanda.
Nazi izindlela ezi-5 zokusingatha ubunzima bempilo obuvela kuNaruto:
1. Yenza izinto ozonda ukuzenza
Esikhathini sokuqala ngqa, uNaruto wamunca ekusebenziseni i-shadow clone jutsu. Kodwa-ke, ngemuva kokukwenza izikhathi eziyikhulu, kwaba yisiginesha yakhe.
Khohlwa iqiniso lokuthi webe umqulu kuHokage ukuze afunde i-jutsu kahle. UNaruto wayezijwayeza i-shadow clone jutsu kangangokuthi lapho kufika isikhathi sokulwa noZabusa, wayeneyakhe i-spin ku-jutsu.
UNaruto waba nekhono kulo ngoba wenza lokho akwenza ukuncela e. Uhlulekile isivivinyo ngoba akakwazanga ukwenza i-shadow clone jutsu.
Leyo nto eyodwa oyizondayo ukuyenza noma leyo nto omunca ukuyenza ngokuvamile okudingayo ukuze uqine.
Noma ngabe ukwehla kwesisindo, izinkinga zezezimali, izinkinga zobudlelwano noma ukufunda okuthile okusha. Kufanele wenze izinto ozonda ukuzenza ukuze ube ngumuntu ongcono.
Ngangivame ukuzonda ukusondela kwamantombazane ngoba ukwesaba ukwenqatshwa kwakuphakeme kakhulu kunesifiso sami sokuba nentombazane enhle.
Lapho senginqume ukuthi ngizokhuluma okungenani namantombazane ama-5 kuye kwayi-10 ngosuku, impilo yami yokuphola yashintsha.
2. Kwesinye isikhathi kufanele wenze umsebenzi oyisidina
Bheka, ngiyazi ukuthi sonke sifuna ukuzijabulisa futhi senze izinto ngokushesha okukhulu ngangokunokwenzeka.
Manje kule minyaka yobuchwepheshe obusezingeni eliphezulu sifuna konke ngokuchofoza inkinobho. Kodwa-ke, ezikhathini eziningi ngeke ukuthole okufunayo ngokulindela izinto ukuthi zibe lula.
Isikhathi esiningi kufanele wenze okuningi kuyisicefe izinto ukuze ube nezinto ezimangalisayo.
Naruto wenza okuningi isidina. Ngenkathi efunda iRasengan bese efunda ubuciko bezinsalela zokungena kumodi yezazi. Umsebenzi omningi oyisidina.
Lapho impilo yakho iba nzima futhi izinto ziqala ukwenzeka njengokulahlekelwa ngumsebenzi, ukungena ezikweletini, ukuxoshwa efulethini lakho noma ukukhungathekiswa yintombi yakho, uzozithola wenza izinto eziningi eziyisidina.
Abanye abantu baya ekolishi ukuze bakwazi ukuzijabulisa futhi bahlangane nabantu abasha kodwa umvuzo wangempela ukwenza okuningi kwalowo msebenzi oyisicefe.
Ngikhumbula ngibuka iziqephu zikaNaruto ngenkathi efunda i-rasengan.
Iziqephu ziqale ukuzizwa njengeziqephu zokugcwalisa futhi sonke siyazi ukuthi abalandeli be-anime bazizwa kanjani ngeziqephu zokugcwalisa. Kodwa-ke, lapho ekugcineni efunda i-rasengan futhi eyisebenzisa kuKabuto, ukubuka lezo ezinye iziqephu bekufanele kakhulu.
Umsebenzi oyisicefe uyadingeka.
Okuhlobene: Izilinganiso ezingama-52 zama-Anime Ngokusebenza Kanzima Ezoshintsha Umbono Wakho
3. Kulungile ukuba wedwa
Njengabantu singabantu abafisa ngempela ukuba seduze nabanye abantu, njengengxenye yesizwe. Kodwa-ke, ngezikhathi zesizungu, lesi yisikhathi sakho sokuqondisa ingqondo yakho.
UNaruto wabhekana nesizungu esiningi empilweni yakhe.
Ukunganakwa nokwaliwa yidolobhana.
Ngezikhathi zakhe zokuba nesizungu, uNaruto wayezijwayeza ukuphonsa ama-kunai nama-Shurikens eyedwa. Leso sizungu simqhubekele ekutholeni injongo yakhe futhi lokho bekuzoba 'yi-hokage futhi wonke umuntu amazise.'
i-anime enamandla angaphezu kwawemvelo nempilo yesikole
Isizungu senza uNaruto waba namandla.
Kungaba nzima ukusonga ikhanda lakho ngalokho.
Abanye bangathi, 'ukuhlala eduze nabangane nomndeni kungcono.' Impela ukuba nabathandekayo kungumuzwa omuhle. Kodwa-ke, ekubeni wedwa ungakhula. Ungazazi kangcono.
UNaruto wayengesabi ukuzenza isilima ngoba wafunda ukuzithanda yedwa.
Lapho kungekho muntu oseduze ozokukhathalela, udinga ukufunda ukuzinakekela. Lokhu kukufundisa ukuzethemba futhi ujabulele inkampani yakho.
Uma unenkinga yokujabulela ukuba wedwa nokuba khona nawe, lokho kusho ukuthi awuzizwa kahle ngawe futhi udinga abantu abazokuqinisekisa.
i-anime enhle ebizwa nge-anime ukuyibuka
UNaruto wangifundisa ukuthi ukuba wedwa kuhle.
Kulula ukuzizwa umuhle ngawe uma unabangani nomndeni kodwa kuthiwani uma uwedwa njengoNaruto, uzokwazi ukuzibheka esibukweni bese uthi, 'Ngiyazithanda.'?
Okuhlobene: Izilinganiso ezingama-21 kuphela ze-Anime Mayelana Nesizungu Ozoze Udinge Ukuzibona
4. Abangane beqiniso bazohlala nawe ngezikhathi ezinzima
Sonke siye saba nalabo bangane esihlanganyela nabo. Kungenzeka ukuthi besibazi kusukela esikoleni esiphakeme.
Sizijabulisa nabo futhi siye emamuvini nabo. Kodwa-ke, lapho ukuhamba kuba nzima noma uma ulahlekelwa yikho konke noma usenkingeni enkulu, bonke abangane mbumbulu bayanyamalala.
Abantu abahlala ezikhathini ezinzima bangabangane bakho bangempela
Lesi sifundo asiveli kuNaruto kepha kunalokho iSasuke.
USasuke ungumngane owesabekayo kodwa uNaruto wamlandela. USasuke ubedlala ngokweqile, ezithanda kakhulu yena.
UNaruto uthathe iqembu lama-ninjas aholayo ukuthola uSasuke kodwa wavele wabhafela ebusweni nasemizamweni yabo.
USasuke wasebenzisa neNaruto ukuvusa iSharanan yakhe. Kubonakala sengathi iNaruto yayingelutho ngaphandle komncintiswano weSasuke.
Kwaze kwaba yimpi yokugcina ngemuva kokuba behlule uKaguya lapho uSasuke eqonda ukuthi uNaruto waye iqiniso umngane.
Manje uma sikhuluma iqiniso, akekho ojaha umuntu ohlale engabanaki. Ngakho-ke, ukuhumushela i-anime empilweni yangempela, umngani wangempela uzohlala ngezikhathi zakho ezinzima.
Asikho isidingo sokujaha abantu abangabazisi ubuqotho bakho.
Okuhlobene: Izilinganiso ezingama-21 zobungani be-Anime Ezizokwenza Uzizwe Ufudumele Futhi Ungacabangi
5. Thola umeluleki noma funa usizo
UNaruto akazange afunde imodi ye-rasengan noma i-sage eyedwa.
Wayenomeluleki. UJiraiya wamfundisa i-rasengan wabe esemthatha iminyaka emibili ukuthi abe namandla.
UNaruto wafunda kuSannin wodumo futhi ngaleyo ndlela wabuyela edolobhaneni lamaqabunga enamandla kakhulu.
Ungafunda wedwa kepha uma unamathele lapho kufanele uthole umuntu ozokusiza ukhule.
Kungenzeka kusuka ezincwadini, umuntu omaziyo, umuntu obheka kuye, noma ngabe kufanele ukhokhele lowo muntu kungakufanelekela lokho.
Ukufundela umsebenzi ubuciko obulahlekile futhi bambalwa abakwenzayo. Le yindlela esheshayo yokufunda futhi ngiyazisa kakhulu kunemfundo yasekolishi.
Ukufunda kumuntu osevele uxazulule inkinga onayo noma ophila uhlobo lwempilo oyifunayo, lowo ngumuntu okudingeka umlalele.
Lezi yizifundo ezinhlanu ezitholwe ku-anime yeNaruto.
Iposi libhalwe ngu AJ Martinez - https://andyarttv.com/
I-100 + Yezilinganiso ezinhle kakhulu zeNaruto Zabalandeli beShounen Anime
Iseluleko Sempilo Esingcono Kakhulu Ongasifunda Kuzinhlamvu ezingama-53 ze-Anime!